နေဝင်ချိန်စဉ်အတွင်းဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရထားစီးနင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > နေဝင်ချိန်စဉ်အတွင်းဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရထားစီးနင်း
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 28/08/2020)
ဥရောပအနုပညာနှင့်ပြည့်ဝ၏, သမိုင်း, နှင့်ယဉ်ကျေးမှု. အံ့သြစရာမရှိပါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးနေဝင်ဆည်းဆာမှအိမ်ပြန်ကြောင်းထို့နောက်ရှိပါတယ်. နှင့် တစ်ဦးကရထား Save, ရထားစီးနင်းအားလုံးခရီးအကြောင်း, မဟုတ်အမြဲတမ်းလိုရာခရီး. ဒါကြောင့်, ပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူနှင့်ပြင်ဆင်. ဤသည်ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားစီးတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲအဘို့ဆောင်သောပွဲဖြစ်မယ့်.
ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားစီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကန်ဖို့, ကျနော်တို့က Unorthodox ရှေးခယျြခဲ့ – ခရိုအေးရှား
ခရိုအေးရှားသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာသင်သည်သင်၏ရထားပြတင်းပေါက်ကနေအဆင်းလှသောတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းလို့မရဘူးအဘယ်မှာရှိ. ခရိုအေးရှား သူမ၏အံ့သြဖွယ်အတွက်လည်းလူသိများသည်နှင့် အသက်ရှူနေဝင်ဆည်းဆာ, ဒါကြောင့်သင်သေချာအောင် သင့်ရဲ့ကင်မရာကိုအဆင်သင့်ရှိ သငျသညျနေဝင်ချိန်စဉ်အတွင်းဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရထားစီးကိုရှာဖွေခညျြနှောငျနေအဖြစ် ဒီမှာ.
သင်ထင်လာတဲ့အခါ ဂျာမနီ, သင်ကနေဝင်ဆည်းဆာချိန်အတွင်းဥရောပအကောင်းဆုံးရထားစီးရှိခြင်းစဉ်းစားကြဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဘယ်အရာကိုမှာအံ့သြပီတိဖြစ်ရလိမ့်မည်. သငျသညျအတွက်အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်ထဲကနေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီအမြင်လည်းမရ မြူးနစ်. cloudless မိုးကောင်းကင်များနှင့်လှပသောမြို့ skyline စဉ်းစားပါ.
ဂျာမနီလည်းကမ်းလှမ်းမှုများ ညဥ့်ရထား အမှု၌သင်သည်သင်၏ရထားခရီးအတူနေဝင်ချိန်သို့ဆက်လက်ချင်.
ဒါကအကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစျဦးဖွစျသညျ! နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားစီးတဦး, ဒါဟာအပေါ်တစ်ဦးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် Sardinia အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ, အီတလီ. S'Archittu ပုသိသာသူတို့အဘို့သေးငယ်တဲ့ပင်လယ်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပါသည်! အဓိကကမ်းခြေဆက်ဆက်မှာအံ့ဩဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, သင်မူကားလျော့နည်းခရီးထွက်ငယ်ခငျး-ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်နေသောလူသွားလမ်းသုံးပါသေချာအောင်. သငျသညျအဘယျသို့တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ် ရွာ၏အစစ်အမှန်ကျောက်မျက်: သမုဒ္ဒရာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အရေးယူနေဖြင့်ညှိပြီးတစ်ထုံးကြောကျမဟာ. ပင်လယ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ဟုတ်မဟုတ်, ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်၌တည်ရှိ၏နဲ့တူ နွေရာသီ, သို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်း, ၏ပုံမှန် ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ, S'Archittu အတွက်နေဝင်ချိန်အမြဲမှာကြည့်ဖို့အချိန်အနားယူနှင့်ယူမယ့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရထားစီးဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, TUSCANY, အီတလီ
"ဟုအဆိုပါ Tuscan နေရောင်အောက်တွင်" ထိုကဲ့သို့သောနေရာအနှံ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများသည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. Tuscany အတွက်အလင်းအမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာရိုးရှင်းစွာနေဝင်ချိန်စဉ်အတွင်းဥရောပအကောင်းဆုံးရထားစီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့. ကွောကျရှံ့ဖှယျမျှော်လင့်ထား ညဥ့်ပြီးနောက်နေဝင်ဆည်းဆာညဥ့်. Couple this with စပျစ်ဥယျာဉ်, ဇာတ်ဆောင်ကျေးရွာပေါင်း, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းခြေ, နှင့် သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အ သငျတို့သဖြူစင်သောမှော်များအတွက်စာရွက်ရှိတယ်.
Siena ရထားမှ Naples
သင့်ရဲ့သာစိုးရိမ်ပူပန်သင့်ကင်မရာရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ ဖုန်း app အခါနေရောင်အစုံဥရောပကြောင်းကိုဂုဏ်အသရေအတွက်ယူဖို့အချိန်အတွက်အဆင်သင့်. မှာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဥရောပ၌သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရထားစီးဘွတ်ကင်လုပ်ရန် SaveaTrain.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-train-rides-europe-sunset%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#SARDINIA #နေဝင် #sunsettravel europetrains Tranride tuscany